Yan Aung: ပီတာနှင့် ကျွတ်ဆတ်ဆတ် ညနေခင်း...
ပီတာနှင့် ကျွတ်ဆတ်ဆတ် ညနေခင်း...
အားလုံးပဲ သာပါစ မာပါစခင်ဗျာ.
ကျွန်တော်လည်း ခုတလော တိုင်ပတ်နေလို့ ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ထားပြီး တော်တော်နဲ့ ပြန်မဖွင့်ဖြစ်ဘူး. ဒီနေ့တော့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဟလို့ ခဲထားပြီးခါမှ အလုပ်ကိစ္စတွေက ပေါ်လာတယ်. အဲဒါနဲ့ပဲ မြို့ထဲကို အပြေးအလွှားပြန်သွား၊ ဒီကြားထဲမှာ ရထားက ပုံမှန်လမ်းကြောင်းက မပြေးလို့ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနဲ့ မနက်စာရယ်၊ နေ့လယ်စာရယ်ကို ညနေခင်း ၅ နာရီလောက်ကျမှ လမ်းဘေးက ဟော့ဒေါ့ဆိုင်လေးမှာ အုံးဒိုင်းဂွမ်းလိုက်ရတယ်.း)
ဒီနေ့ ရာသီဥတုကလည်း အေးလိုက်တာဗျာ. လေကလည်း တိုက်လိုက်တာ လွန်ပါရော. လေထုကြီးက အေးခဲပြီး ကျွတ်ဆတ်နေတယ်. ဂျက်ကတ်ကို လက်အရှည်ချပြီး ကိုယ့်လက်ကိုယ် လုံအောင်ဖုံးလို့ လမ်းလျှောက်ရတယ်. ကုပ်ကုပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ လက်ကပျောက်နေတော့ နောက်ကနေကြည့်ရင် လူဝံကြီး လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့ ထင်မလားပဲ. ဟတ်ဟတ်.
ဘူတာရုံကအထွက် သွားချင်တာက 7th Avenue၊ ရောက်နေတာက 6th Avenue၊ ဘေးကလူကိုမေးရအောင်ကလည်း အိုက်တင်က အခံသားဆိုတော့ ဟော.. ဟိုးမှာ မြင်နေရတာ ငါသွားချင်တဲ့ တိုက်ကြီးပဲဆိုပြီး မောင်းတင်ပြီး လမ်းလျှောက်ချလာလိုက်တယ်. လမ်းလယ်လောက်ရောက်တော့ မဟုတ်တော့ဘူးဟလို့ ထင်လာတယ်. မျက်စိကို Zoom တင်ပြီး ဟိုး ခပ်ဝေးဝေးကို လှမ်းရှိုးလိုက်တော့ အားပါးးး 5th Avenue တဲ့... ကိုယ်တော့မှားပြီ ဆိုပြီး အေးခဲကျွတ်ဆတ်နေတဲ့ လေထုကြီးကို ဆတ်ခနဲ ကျောခိုင်းပစ်လိုက်ပြီး ဒီဖက်ပြန်လှည့်လျှောက်လာလိုက်တယ်. ဆံပင်တွေတောင် လေထဲဝေ့၀ဲသွားသေးရဲ့. တရုတ်သိုင်းကားထဲက ကြာပွတ်မင်းသမီး ကြာပွတ်ကို ဝေ့၀ဲလိုက်သလိုပေါ့... ရွှန်းခနဲပဲ... (ဖားသားကြီး ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်ကို တီးတာလည်း အဲဒီ့အသံအတိုင်းပဲ. ရွှန်းးးး ပြီးတော့ ဗြဲ ဆိုတဲ့အသံတောင်တွဲပါလိုက်သေး. အဟတ်ဟတ်)
လျှောက်နေရင်းတန်းလန်းမှာပဲ အာရုံရလာတာနဲ့ နောက်ဖက်ကို ဆံပင်ကေမပျက်အောင် အသာစောင်းပြီး ကြည့်လိုက်တော့ လားလား... M14a ဆိုတဲ့ ဘတ်(စ်)ကားကြီးတစ်စီးက ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးနဲ့ ကုန်းဆင်းအတိုင်းလှိမ့်ဆင်းလာနေတယ်. ဒီလိုအေးတဲ့ ရာသီဥတုထဲမှာ လမ်းလျှောက်ရာမှာ ပျင်းကြောထနေတဲ့ ကျွန်တော် လျှောက်နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ဘက်ဂီယာပြန်ဆွဲပြီး မှတ်တိုင်မှာ ပဲလေးနဲ့ ရပ်နေလိုက်တယ်.
အမှန်တော့ ကျွန်တော် ဘတ်စ်ကားသိပ်စီးလေ့မရှိပါဘူး. ရထားနဲ့ပဲ ဟိုဟိုဒီဒီ အကုန်သွားလို့
ရနေတော့ ရထားပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်. ရထားအတွက် လက်မှတ်ကဒ်ပြားလေးက တစ်လစာ Unlimited ၀ယ်ထားရင် ဘတ်စ်ကားလည်း စီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ အလကားရနည်းလားဟ ဆိုပြီး လမ်းကြုံစီးတာပါ. ဆိုလိုချင်တာကတော့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်မှတ်တိုင်မှာ ဘယ် ဘတ်စ်ကားရပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပ်မသိဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ.
အဲဒါနဲ့ပဲ ဘတ်စ်ကားကြီးက ရှေ့ကိုထိုးရပ်၊ လေဒီတွေကို အရင်ပေးတက်၊ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ကဒ်ပြားကို ဖြတ်၊ သံတိုင်နားမှာရပ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ်၊ ကားကြီးက ၀ူးဝေါဆို စထွက်၊ ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ နောက်မှတ်တိုင်က ကိုယ့်မှတ်တိုင်ဆိုတာ သိလျက်၊ Stop ခလုတ်ကလေးကို Tap၊ ဂွက်....
သိပ်တော့မမိုက်ပါဘူးဗျာ. ကားပေါ်စတက်တယ်. နောက်မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းမယ်ဆိုပြီး Stop Sign ကို ချက်ချင်းပဲ ပြန်နှိပ်လိုက်တယ်. ဒရိုင်ဗာကြီးက နောက်ကြည့်မှန်ထဲကနေ ကိုယ့်ကိုရှိုးနေလေရဲ့. ဒီကောင်ငပျင်းဆိုပြီးတော့လေ. ဟတ်ဟတ်.
မှတ်တိုင်မှာလည်း ဆင်းလိုက်ရော ကိုယ်မှားပြီဆိုပြီး နောက်တစ်ခေါက် ရေရွတ်မိပြန်ပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုတော့ မှတ်တိုင်ကို ထားထားတဲ့ပုံစံက မီးပွိုင့်ကျော်ပြီး ကားနှစ်စီးစာလောက် ရပ်ထားတဲ့ အကွာအဝေးလောက်မှာ ထားထားတတ်တာပါ. ကျွန်တော်က သွားချင်တာက 7th Avenue၊ တက်စီးတာက 6th Avenue ရဲ့ အစ (တစ်နည်းပြောရရင်. 5th Avenue ကျော်ကျော်လောက်လေးကပေါ့)၊ ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေက 6th Avenue မီးပွိုင့်ကို အကျော်၊ 7the Avenue ရဲ့ အစခပ်ပါးပါးလေးမှာ ကားကြီးက ထိုးရပ်သွားတာပေါ့ဗျာ...
အောင်မျငေး. ငါ့နှယ်နော်. ပျင်းပါတယ်ဆိုမှ ဟိုး လမ်းထိပ်မှာ မှတ်တိုင်ကို ထားထားတယ်. လျှောက်ရချည်သေးရဲ့ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကို လုံးလုံးကျသွားတော့တာပဲ. စိတ်ကျတော့ ဆံပင်တွေလည်း လိုက်ကျလာတယ်ဗျ. အဲဒါနဲ့ ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ ပြန်မော့တင်လိုက်ပြီး ရှေ့က တ၀ီးဝီးနဲ့တိုက်ချနေတဲ့ လေထုကြီးကို မာန်တင်းပြီး တဟီးဟီးနဲ့ လျှောက်သွားလိုက်တယ်. တဟီးဟီးဆိုတာ ရယ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး. လေက တ၀ီးဝီးတိုက်တယ်. ဆံပင်တွေကိုတိုးတော့ ဆံပင်တွေက နားကို လာရိုက်တယ်. အဲဒီ့မှာ ၀ီးကနေ ဟီး ဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာ...
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်သွားရမယ့်နေရာကို နောက်ဆုံးတော့ ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ. ပြန်လည်းထွက်လာရော နည်းနည်းမှောင်စပြုနေပြီ. ဗိုက်ကလည်း တကြုတ်ကြုတ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင် အဲလေ. ဆန္ဒပြနေပြီပြောတာ.
ဘေးဘီကိုငေးကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်စားစရာမတွေ့ဘူး. ဒါနဲ့ပဲ ဗိုက်လေးကို ကိုယ့်အိတ်ကလေးနဲ့ အသာလေးဖုံးပြီး အိတ်လေးအောက်မှာ ကိုယ့် ညာဖက်လက်ကလေးကို အသာလေးထည့်ပြီး ချော့မော့လာရတယ်. ဗိုက်ကိုပြောပါတယ်.
ရထားပေါ်တက်. ရထားစီးနေရင်း ဘယ်မှာဆင်းပြီး ဗိုက်ဖြည့်ရင်ကောင်းမလဲ အပြေးအလွှားစဉ်းစား. ဒီလိုနဲ့ပဲ Grand Central ဘူတာရုံကြီးကို ရောက်ချလာပါတော့တယ်. ရထားက ဒီမှာပြောင်းစီးရမယ့်အတူတူ အပေါ်တက်ပြီး တစ်ခုခုဆွဲလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဟ ဆိုပြီး ဘူတာရုံအပြင်ဖက်ကို ထွက်ချလာလိုက်ပါတယ်. ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ ဟော့ဒေါ့ဆိုင်တွေက တန်းစီလို့. ရောင်းတဲ့သူတွေက ကုလားတွေများတယ်. သူတို့ မျက်လုံးတွေက ကိုယ့်စီကို ပြုံကျလာတယ်. လူတောင်တုန်သွားသလိုပဲ. ဩော်. လေထုကြီးက အေးခဲစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်လို့ပါဗျာ. တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့. အဟတ်.
ဟော့ဒေါ့က တစ်ခုကို တစ်ဒေါ်လာ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတယ်. ဟော့ဒေါ့ ၄ ခုလောက်စားလည်း မဖြုံလောက်ဘူးရယ်. ဒီတော့ မင်း ဘာစားမလဲဆိုပြီး မျက်လုံးကို ၃၆၀ ဒီဂရီလှည့်လိုက်တော့ ၀ါးးးးးးး တွေ့ပြီ... ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်....
ထမင်းနဲ့ရောင်းလားလို့မေးလိုက်တော့ ထမင်းမရှိဘူးတဲ့ ပီတာပဲရှိတယ်တဲ့.အဲဒါဆိုလည်းပြီးရော ပီတာပဲစားမယ်ဆိုပြီး မှာလိုက်တယ်. Pita တို့ ၊ Hero တို့ဆိုတာ ဂလိုဗျ. Pita ဆိုတာ နံပြားပုံစံ. အထဲမှာ ခုနက အသားတွေ၊ အသီးအနှံတွေကို ထည့်ပြီး လိပ်ပြီး Sandwich စတိုင်လ်စားရတယ်. Hero ဆိုတာကတော့ ပေါင်မုန့်အရှည်လေးထဲကို ညှပ်ပြီး စားရတယ်. ကျွန်တော် ပီတာစားမယ်လို့မှာလိုက်တယ်.
တရှဲရှဲနဲ့ ကြော်လှော်နေတဲ့ မီးဖိုပေါ်က ကြက်သားတုံးတွေကို မကြည့်ရက်တော့လို့ လမ်းတစ်ဖက်ကို မျက်နှာလွှဲပြီး ခဲပစ်နေလိုက်တယ်. တစ်ခြားတော့မဟုတ်ဘူး. ဗိုက်ကအရမ်းဆာနေတော့ ကြက်သားတုံးလေးတွေ မီးဖိုပေါ်မှာ ပြေးလွှားသွားနေတာကို ဆက်ကြည့်ဖို့ ခွန်အားမရှိတော့လို့ပါဗျာ. အဲလိုအဲလို...
ခဏနေတော့ ရတယ်. ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ဖိုက်ဒေါ်လာတဲ့. ရော့. အင့်ဆိုပြီးတာနဲ့ ဘယ်မှာစားရမလဲဆိုတဲ့ ပြဿနာက ပေါ်လာတယ်. ခါတိုင်းဆို ပန်းခြံလေးထဲ ၀င်ပြီး နီးရာ ခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး ဆွဲလိုက်တာပဲ. အခုက သိပ်အေးလွန်းနေတယ်.
(ဒါ ကျွန်တော့်လက်မဟုတ်ပါဘူး. ဂူဂဲလ်ရဲ့ လက်ပါ. ကျွန်တော့်လက်က ဖောင်းဖောင်းအိအိ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဗျ. ပီတာထက်တောင်ဖြူသေးး) )
မထူးပါဘူးကွာဆိုပြီး ဘူတာရုံထဲပဲ ပြန်ဝင်လာလိုက်တယ်. Grand Central ဘူတာကြီးရဲ့ အောက်တစ်ထပ်မှာ Dining Concourse ဆိုတာရှိတယ်လေ. အဲဒီ့မှာ အစားအသောက်တွေရောင်းတယ်. အဲဒီ့ကိုသွားမယ်ဆိုပြီး မြေအောက်ထဲ ဆင်းဝင်လာလိုက်တယ်. Main Hall ကြီးထဲကို ကျွန်တော် အဖြတ်မှာ လူအုပ်ကြီးရယ်၊ ဓာတ်ပုံကင်မရာမီးတွေရယ်က တဖျတ်ဖျတ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်နောက်ကနေ လိုက်လာလို့ အမြန်ပြေးရတယ်. ပါပရာဇီတွေမဟုတ်ပါဘူး. တိုးရစ်တွေပါ. ဘူတာရုံကြီးက လှလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်နေကြတာလေ. ကျွန်တော်လည်း ပီတာ့လက်ကိုဆွဲလို့ အောက်ထပ်ထဲ ပြေးဆင်းလာလိုက်ရတယ်. အဲလိုနာမည်ကြီးပုံများ. ဟတ်ဟတ်.
အောက်ထပ်ထဲရောက်တော့ ဆိုင်တွေတစ်ချို့က သိမ်းနေကြပြီ. ထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာ ခရီးသည်တစ်ချို့က ငိုက်မြည်းလို့၊ တစ်ချို့က ဒီတိုင်း ထိုင်ပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကို လိုက်ကြည့်လို့၊ တစ်ချို့က အပန်းဖြေလို့၊ တစ်ချို့က အိပ်စက်လို့...
ကိုယ်ထိုင်ဖို့ နေရာတစ်နေရာကို တော်တော်ရှာယူရတယ်. တွေ့လည်းတွေ့ရော အဲဒီ့နေရာကို ၀င်ထိုင်၊ ရှေ့ကြည့်နောက်ကြည့်လုပ်လိုက်တော့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ Salad တွေ၊ ဒိန်ချဉ်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်. နောက်ဖက်မှာ ဆိုင်တွေက ပိတ်နေပြီ. ဘေးဖက်မှာ တစ်ယောက်က အိပ်ပျော်နေတယ်. နောက်ဘေးတစ်ဖက်မှာတော့ အတွဲတစ်တွဲက အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်. ဩော်. ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ပြောပါတယ်.း)
ကျွန်တော်လည်း လွယ်ထားတဲ့ အိတ်ကို အသာချ၊ ပီတာ့ကိုဆွဲထုတ်၊ ပြီးတာနဲ့ ဆံပင်ကို နောက်တစ်ခေါက် သပ်တင်စရာမလိုအောင် ဖိပြီး အနောက်ကို အသာလှန်ချ၊ ခေါင်းလေးကို အသာလေးစောင်းပြီးတာနဲ့
အုံး.. ဒိုင်း.. ဂွမ်း... အုံး.. ဒိုင်း.. ဂွမ်းဆိုပြီး.....
ဘေးကလူတွေတောင်လှည့်ကြည့်ကြတယ်. ရှေ့ကဘူတာရုံမှာ ရထားဆိုက်လာလို့ပါ. ဟတ်ဟတ်.
ဒီလိုနဲ့ စားနေခိုက်မှာပဲ တစ်ယောက်က ကြည့်နေသလိုခံစားရလို့ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့.. ရှေ့တည့်တည့်က ဆိုင်က ကောင်မလေးက ကိုယ့်ကိုပြုံးပြီး ကြည့်နေတယ်.
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ... ပီတာကို အသာချပြီး Napkin လေးနဲ့ ကိုယ့်ပါးစပ်ကို အသာသုတ်လိုက်တော့ လားလား.. ပီတာရယ်လေ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းမှာပါ နေရာယူထားတယ်... ဆိုးချက်...
ဟွန့် ဆိုပြီး Napkin နဲ့ သုတ်ချပစ်လိုက်တယ်. ပြီးတာနဲ့ ရှေ့က ကောင်မလေးကို အသာမေ့ထားလိုက်ပြီး ပီတာကို အငြိုးနဲ့ ဆက်ဆွဲပစ်လိုက်တယ်. နောက် ၃ မိနစ်လောက်နေတော့ ပီတာတစ်ယောက် R.I.P ဖြစ်သွားပါတော့တယ်. (R.I.P = Rest In Peace လို့ပြောတာ.း) )
ပြီးလည်းပြီးရော အချိ်န်မဖြုန်းအားတော့ဘူး. အိမ်မှာ လုပ်စရာတွေက တန်းစီနေလေရဲ့. အိတ်ကိုပြန်လွယ်၊ အမှိုက်ထုတ်လေးကို အမှိုက်ပုံးထဲပစ်ထည့်၊ ဒီကိစ္စပြီးတော့ဟိုကိစ္စက စခန်းထတယ်. ဒီနယ်မြေက ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဆိုတော့ ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာ သိနေတယ်လေ. တည့်တည့်ကိုလျှောက်ပါတယ်. ညာဖက်ကိုကွေ့ပါတယ်. ဘယ်ဖက်ကို ဆင်းပါတယ်. နောက်ထပ် ဘယ်ဖက်ကို ထပ်ချိုးပါတယ်. ပြီးတော့ ညာဖက်ကို ဆတ်ခနဲ လှမ်းရှိုးလိုက်တော့... သူရယ်လေ... မိန့်မိန့်ကြီး ပြုံးကြည့်နေလေရဲ့...ဒိန်းခနဲ ကိုယ့်ရင်တွေဘာတွေတောင် ခုန်သွားသလိုပဲ.
အဲဒီ့ မန်းထဲကို အပြေးဝင်ပြီး နောက်တစ်ခါ အုံးဒိုင်းဂွမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်.
နောက် ၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် လပ်ကီးဆဲဗင်း ရထားကြီးပေါ်မှာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ ငြိမ့်ပြီး စာတစ်ပိုဒ်ဖတ်လိုက်၊ နှစ်ရေးလောက်အိပ်လိုက်နဲ့ ခရီးဆက်နေခဲ့ပါတော့တယ်. ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အူကြောင်ကြောင် ညနေခင်းတွေကို ဘယ်သူမှမသိဘူးဟဆိုပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ ပီကေလေးတောင် ထုတ်ဝါးလိုက်သေး. အဟတ်ဟတ်...
ဂလိုပဲ... လောကကြီးက ခါးသက်အေးစက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း အေးစက်ခါးသက်စွာနဲ့ အရွဲ့တိုက်ပြီး ခရီးဆက်နေခဲ့တယ်. ည ၉ နာရီမှာ ဘလော့ဂ်ကို အပီပြန်ကိုင်မယ်လို့ ခဲထားတာ ၁၁ နာရီထိုးမှ ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်တယ်.
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရယ်လေ ပရိသတ်ကြီးကို အမြဲ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေခဲ့ပါတယ်. တန်းပလိတ်ကို စိတ်ကြိုက်မတွေ့လို့ ဂျီးများတာရယ်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ချင်လို့ ပိတ်ထားတာရယ်နဲ့ပေါင်းပြီး ကျွန်တော် ပရိသတ်ကြီးကို စော်လကားမော်လကားသလို ဖြစ်သွားမိရင် ဒီပို့စ်လေးနဲ့အတူ ပီတာ့လက်ကိုဆွဲပြီး ကျွန်တော် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်.
ယောရောရှိ. ယောရောရှိ...း)
အိပ်တော့မယ်ဗျာ. နောက်မှပဲ တန်းပလိတ်ကို အေးဆေးဆက်ကလိတော့မယ်.
ဂွတ်နိုက်ပါ ပီတာ.. အဲလေ. ပရိသတ်ရေ....
Posted By Yan
အယ် ဒူ့လက်ကြီးလဲ... ဟင်
ဒီဆံပင်ကတော့လေ ၀ဲခနဲ ရွှီးခနဲ ဖြစ်နေတာ ကတုံးတုံးပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်မှပဲ အေးတော့မယ်...း)
ဓာတ်ပုံအောက်မှာ စာနဲ့ရှင်းထားတယ်. သေချာဖတ်ကြည့်.း) ဆံပင်က ဆန်းဒေးဆို ဖရီးစတိုင်လ်ထားတယ်. ဆီမလိမ်းဘူး. ဒါကြောင့် ရွှန်းနေတာ. နေရောင်အောက်ထဲလမ်းလျှောက်ရင် ဆံပင်တွေ မီးထတောက်မှာစိုးလို့ ဦးထုပ်နဲ့တောင် ကာထားရတယ်. ကဲ ဘာသိချင်သေးလဲ. :)))
ကြုံဘူးပေါင် ဆံပင်ကိုများ နေ့ရက်အလိုက် ပုံစံပြောင်းထားတယ်လို့ ပဲများချက်တော်...လိုက်လို့တောင်မမှီဘူး...ဟိ
ဒါဆို မန်းဒေး တူ ဆက်ဒဒေးကို ဘယ်လိုပုံစံလဲ ပုံနှင့်တစ်ကွ သိချင်မိပါတယ်။
ထင်တော့ထင်သားပဲ ဒီလက်မဟုတ်လောက်ဘူးလို့း)
အလိုရယ်တဲ့အလေ ဖွဲ့ချက်နွဲ့ချက်က အံ့ကြီးရယ် သြရပါ၏..
တရွှန်းရွှန်း မြည်နေတဲ့ ဆံပင်လေတိုးသံ သရုပ်ပေါ်ချက်က ပြိုင်မြင်းကြီး နှာမှုတ်သံနဲ့ ပြေးနေသလိုပဲ..း)
ပီတာကြီးကို ဂွမ်း လိုက်ပုံ သရုပ်ပေါ်ချက်ကလည်း အသည်းတယားတယားနဲ့ လူဝံကြီး မုန့်စားပြိုင်ပွဲ ဝင်နေသလိုပဲ (ရေ၊ အအေး၊ ကာဖီ၊ လ္ဘက်ရည် ဘာမှ မသောက်ပါလား)
အမလေးလေး နင်ထှာ နင်ထှာ (လဗင်း နင်လိုက်တာ)
“၁၁ နာရီထိုးမှ ကွန်ပြူတာရှေ့ရောက်တယ်.
ဖူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး” တဲ့ ဒွတ်ခပဲ သက်ပြင်းချသံမဟုတ်တဲ့ ထူးဆန်းသံကြီးးး...
ကိုရန်အောင့်စာ ဖတ်ရတာ အရသရှိလိုက်ပုံက အေးခဲတောင့်တင်း မောဟိုက် ဗိုက်ပါပြည့်သွားသလို..း)))
ဂျဂါးမချပ်.. နှစ်လပြည့်တော့မယ်... အဟက်ဟက်ဟက် အက်အက်အက်..း)
ဝေ့ဝဲနေတဲ့ ဆံကေသာတွေ ဆိုတာ ပြောင်းဖူးပင်တွေ လေတိုးသလိုလား ဟင် :P :P
တကယ်က ပီတာနှင့် အုန်း ဒိုင်း ဂွမ်း ညနေခင်းဖြစ်ရမှာ... :P
တန်းပလိတ်လေး ရိုးရှင်းနေတာ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတယ်ဆရာ..
ဆရာရန်ရဲ့ ပီတာကို လာအားပေးတာပါ =)
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said...
နံပြား အဆာသွပ်လို့ခေါ်ရမယ် ထင်ရဲ့..
မြည်သံစွဲ အလင်္ကာနဲ့ ပြန်သွားတာမို့ပါ
ပြင်စရာမလိုပါဘူး zif ချွန်းသွားဦးမယ်။ ရွန်း ဆိုပြီး.
ဗျို့ ကိုကြီးရန်ရေ ...
မတွေ့တာလည်း ကြာပြီ။ အခု အလည်လာရင်း ကွန်မန့်လေး ပေးသွားတယ်။ စီဘောက်က မရလို့လေ။ ပို့စ်တွေကို စိတ်ကြိုက်ဖတ်သွားတယ်ဗျာ။
ပီတာဆိုလို့ ဘာကြီးလဲလို့... :P...အဲလို လမ်းမှားနေရင် စိတ်ညစ်စရာကြီးနော်... မောတယ်.. ပင်ပန်းတယ်... .:D:D... ဖတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး... ဘယ်မှာလဲ US မှဟုတ်...
B & A said...
စာတွေလန်းတယ် ဂွတ်ချက်ကတော့9လောက်ရှိတယ်
ဘယ်သူလဲလို့ လာခြေရာခံတာ..။ အဟတ် ဟတ်..။ ဘာမှခံလို့မရဘူး..။
Yay Khae Nget
းးး Yan Aungးးး
Want to liveasimple life without worrying about money and social status...
းး My Selected Labelsးး
Poems (112) Essays (68) Knowledgebase (57) Humor (55) Anecdotes (50) Myself (31) Novels (16) Education (15) Tag (13) Notable Quotes (6) Recipes (5) travelling (3)
းး Popular Postsးး
ရင်နှင့်ပျိုးသော သစ်ပင်ငယ် (သို့မဟုတ်) .....
မော်နီတာကို ကြာကြာကြည့်စေနိုင်ဖို့ ဒါကိုသုံးပါ...
RAM နည်းနေရင် အလွယ်ကူဆုံး ဘယ်လိုမြှင့်မလဲ.
တာရာမင်းဝေ၏ နောက်ဆုံးခရီး ဓာတ်ပုံများ…
သူရယ်... ကိုယ်ရယ်.. ပင်လယ်ကြီးရယ်...
Menu Tab လုပ်နည်းများ - ပုံစံ (၁)
းးး Tik Tokးးး
းးး iReadးးး
10 Rainbows (1) American Lottery (1) Anecdotes (50) Announcements (10) Bicycling (5) Birthday Wish (3) blog reader (2) BlogBook (22) bloggers (6) Blogging (24) Brotherhood (1) Burma VJ (1) california (2) Cartoons (6) Celtic Woman (1) Christmas (2) ColdPlay (1) College Application (1) Committee (11) Creed (1) Dad (4) Daw Aung San Suu Kyi (3) Dead Pirates (1) Demonstrations (18) Donations (13) Ebooks (19) Education (15) Elections (2) EOT Problem (2) Essays (68) Ethics (2) Facebook Like Button (1) Festivals (1) Flying Kites (2) Footnote (1) Friends (26) General Aung San (2) General Stuffs (17) Gospels (1) Halloween (2) help (2) Hobby (1) Hope (1) Humor (55) Hunger Strike (1) InDesign (1) Interview (1) iPhone (1) Ka-Htein (8) Knowledgebase (57) Language (1) Las Vegas (1) Love (80) LuDu U Sein Win (1) Ma (14) Mandalay (2) Mar Mar Aye (1) MBA (3) MBAA (1) MBS (2) Media Campaign (3) Meiktila (1) Memoirs (2) Memorials (14) menu bar (1) mettashinsayadaw (1) Mg Sein Win (1) Milestones (1) mobile post (1) Modern (3) Mom (2) Moral Stories (1) Music (3) My Activities (21) My Politics (3) Myanmar (3) myanmar calendar (1) Myanmar Entrepreneurs (1) Myanmar Philanthropists (14) Myself (31) Nagis Cyclone (5) Nat Shin Naung (1) New Year (1) News (48) NLD (2) Notable Quotes (6) Novels (16) Obama (1) Obituaries (3) Online Tutoring (1) Oscar (1) PageMaker (1) Personality (1) piano (1) Poem Contests (1) Poems (112) Poems Talk (1) Portal (1) Prayer (1) Printer Friendly (1) Prose (1) Pyi Hla Phay (1) RAM (1) Recent Comment (1) Recipes (5) Request (2) Resolution (1) Rock (1) Sai Htee Saing (1) Sasana Moli (1) Saya Zawgyi (1) Sharing (3) Shelley (1) Shocks (14) Socrates (1) Songs (34) Sports (1) Successful People (1) Tag (13) Teamworks (2) Templates (2) Thadingyut (1) Thingyan (2) Thoughts (59) Trainings (1) Travel (4) travelling (3) True Stories (1) U Kovida (4) Unicode (2) US Election (1) Videos (20) World Politics (1) yanni (1) Yaykhaenget (2) Youth (1) Zawgyi (1)